Tantara: Nahoana i Davida no Tsy Maintsy Nandositra - Tranonkala Ofisialin’ny Vavolombelon’i Jehovah
HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Asamey Ateso Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bambara Baoulé Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fitenim-paritra Alemà Frantsay Féroïen Ga Garifuna Goun Grika Groenlandey Guarani Guna Géorgien Haoussa Hebreo Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Jula Kabarde-Tcherkesse Kabiyè Kabyle Kachin Kannada Kazakh Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kissi Kongo Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Kwangali Kwanyama Lamba Laosianina Letonianina Lhukonzo Lingala Litoanianina Luganda Lugbara Luo Luvale Macua Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mapudungun Marathe Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mende Miskito Mixe Mixtèque (Guerrero) Mizo Mongol Mooré Myama Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndebele Ndonga Ngabere Niue Norvezianina Nuer Nyaneka Nzema Népali Oromo Ossète Otomi (Lohasaha Mezquital) Ouïgour (Arabo) Papiamento (Curaçao) Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiché Romanianina Rosianina Runyankore Rutoro Samoanina Sango Sena Sepedi Serba Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swati Tagalog Tailandey Tajiki Tamoul Tankarana Tarasque Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Aostralianina Tenin’ny Tanana Britanika Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Estonianina Tenin’ny Tanana Failandey Tenin’ny Tanana Frantsay Tenin’ny Tanana Holandey Tenin’ny Tanana Hongroà Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Nikaragoanina Tenin’ny Tanana Paragoayanina Tenin’ny Tanana Tseky Tenin’ny Tanana Venezoelianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Costa Rica Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tenin’ny Tanan’ny avy any Philippines Tetun Dili Tiorka Tiv Tlapanèque Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tseky Tshwa Tsonga Turkmène (Sirilika) Twi Tzotzil Télougou Umbundu Venda Vezo Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Wolof Xhosa Yorobà Zapoteky (Andilan-tany) Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa tzeltal Éwé
TAORIAN’NY namonoan’i Davida an’i Goliata, dia nentin’i Abnera komandin’ny miaramila teo amin’ny Israely ho any amin’i Saoly izy. Nankasitrahan’i Saoly aoka izany i Davida. Nataon’i Saoly ﬁloha tao amin’ny taﬁny izy ary noraisiny mba hipetraka tao amin’ny tranon’ny mpanjaka.
Tatỳ aoriana, rehefa niverina avy niady tamin’ny Filistinina ny taﬁka, dia nihira toy izao ny vehivavy: ‘I Saoly nahafaty arivoarivo; fa i Davida nahafaty alinalina.’ Nahatonga an’i Saoly hialona izany, satria nomena voninahitra bebe kokoa noho i Saoly i Davida. Nefa tsy mba nialona i Jonatana zanakalahin’i Saoly. Tiany aoka izany i Davida, ary i Davida koa dia tia an’i Jonatana. Koa dia nanao ﬁfanekena izy roa ireo fa ho mpisakaiza hatrany hatrany.
Nahay nitendry harpa tsara tokoa i Davida, ary tian’i Saoly ny mozika nolalaoviny. Indray andro anefa ny ﬁalonan’i Saoly dia nitarika azy hanao zavatra nahatsiravina. Raha mbola nitendry harpa i Davida, dia nandray ny lefony i Saoly ary natorany izany, sady nilaza izy hoe: ‘Hafantsiko eo amin’ny rindrina i Davida!’ Nefa nihilana i Davida ary tsy nahavoa azy ilay lefona. Fantatr’i Davida àry izao fa tena tokony hitandrina izy.
Tsaroanao ve ny fampanantenana nomen’i Saoly? Nilaza izy fa hanome ny zanany vavy ho vadin’izay lehilahy mahafaty an’i Goliata. Tamin’ny farany i Saoly dia nilaza tamin’i Davida fa afaka mahazo an’i Mikala zanany vavy izy, nefa tsy maintsy mamono 100 avy amin’ny Filistinina fahavalo aloha. Alao sary an-tsaina izany! Nanantena marina tokoa i Saoly fa hamono an’i Davida ny Filistinina. Nefa tsy nanao izany izy ireo, noho izany, dia nomen’i Saoly ny zanany vavy mba ho vadin’i Davida.
Indray andro dia nilaza tamin’i Jonatana sy ny mpanompony rehetra i Saoly fa naniry hamono an’i Davida izy. Nefa hoy i Jonatana tamin’ny rainy: ‘Aza manimba an’i Davida. Mbola tsy nanao ratsy na inona na inona taminao izy. Fa izay rehetra nataony kosa dia fanampiana lehibe ho anao. Nanao vivery ny ainy izy fony namono an’i Goliata, ary rehefa nahita izany ianao dia faly.’
Nihaino ny zanany lahy i Saoly ary nampanantena izy fa tsy hanimba an’i Davida. Nentina niverina i Davida, ary nanompo indray an’i Saoly tao an-tranony izy, tahaka ny nataony teo aloha. Indray andro anefa, raha mbola nitendry zava-maneno i Davida, dia natorak’i Saoly indray tamin’i Davida ny lefony. Nihataka i Davida, ary namely ny rindrina ilay lefona. Fanintelony izao! Fantatr’i Davida izao fa tokony handositra izy!
Iny alina iny i Davida dia nandeha ho any an-tranony. Nefa naniraka lehilahy sasany i Saoly mba hamono azy. Fantatr’i Mikala izay nokasain-drainy hatao. Koa hoy izy tamin’ny vadiny: ‘Raha tsy mandositra ianao anio alina, dia ho faty rahampitso.’ Tamin’iny alina iny i Mikala dia nanampy an’i Davida mba handositra avy eo amin’ny varavarankely iray. Nandritra ny ﬁto taona teo ho eo i Davida dia tsy maintsy niaﬁna niﬁndraﬁndra toerana mba tsy hahitan’i Saoly azy.
1 Samoela 18:1-30; 19:1-18.
Nahoana i Saoly no nialona an’i Davida? Inona anefa no tsy nampitovy an’i Saoly sy Jonatana zanany lahy?
Ahoana no namonjen’i Mikala an’i Davida, ary inona no tsy maintsy nataon’i Davida nandritra ny ﬁto taona nanaraka?
Nahoana ny ﬁfankatiavan’ny “ondry hafa” sy ny “ondry vitsy” no mitovy amin’ny ﬁfankatiavana lalina teo amin’i Jonatana sy Davida? (1 Sam. 18:1; Jaona 10:16; Lioka 12:32; Zak. 8:23)
Nahoana ny 1 Samoela 18:4 no mampiseho fa tena nanaiky izay noﬁdin’i Jehovah ho mpanjaka i Jonatana, na dia izy aza no tokony handimby an’i Saoly?
Mety hitarika ho amin’ny fahotana lehibe ny ﬁalonana. Ahoana no ahitana izany amin’izay nitranga tamin’i Saoly? (1 Sam. 18:7-9, 25; Jak. 3:14-16)
Nahoana isika no afaka milaza fa mety ho nahafaty an’i Jonatana ireo teniny ao amin’ny 1 Samoela 19: 4, 5? (1 Sam. 19:1, 6)